वैकल्पिक विवाद समाधान वकिल, कानून कम्पनीहरु को लागि जापान मा हरेक शहर - सबै वकिल जापान मा अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी पोर्टल को वकिल.
वैकल्पिक विवाद समाधान वकिल, कानून कम्पनीहरु को लागि जापान मा हरेक शहर
एक शब्द छ वर्णन गर्न प्रयोग धेरै फरक तरिका को समाधान कानूनी विवाद बिना जा अदालत । बढ्दो लागत को मुद्दा छ, बनाउने परम्परागत थुप्रै व्यक्तिहरूलाई लागि र कारोबार छ । एकै समयमा, नागरिक कोर्ट अनुहार परिणामस्वरूप, मा ढिलाइ को एक वर्ष वा बढी को लागि निजी दल आफ्नो सुने अवस्थामानयाँ प्रकार को कार्यवाही मा विकसित गरिएको छ प्रतिक्रिया, र तिनीहरूले साबित गर्दै लाभदायी बचत, समय र पैसा को लागि संलग्न सबैलाई छ । मा स्थित छ टोकियो, जापान र सेवाहरू प्रदान गर्न गैर-जापानी व्यक्तिविशेष र संघसंस्थाहरूले साथै जापानी व्यक्तिविशेष र संघसंस्थाहरूले. अभ्यास क्षेत्र समावेश कर्पोरेट व्यवस्था, विलय र अधिग्रहण, लाइसेन्स र एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबंध । व्यवस्था दृढ अवलोकन बेकर प्रदान गरेको छ असाधारण कानूनी सेवा गर्न ग्राहकहरु परिचालन जापान मा र अन्तर्राष्ट्रीय लागि चार दशक, र छ एक को जेठा, शीर्षकमाथिको भएकोले यसको ढोका रूपमा एक सम्बन्धित कार्यालय को बेकर मा.
हामी हाल छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन एक नेता बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानून कम्पनीहरु प्रदान, व्यापार व्यवस्था सल्लाह उच्चतम गुणवत्ता को भर युरोप, मध्य पूर्व, एशिया र अमेरिका, पाँच सय वकिल मा बीस-सात प्रमुख व्यापार केन्द्र को एक दुनिया भर, हामी प्रदान एक व्यापक छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन छ एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दृढ परामर्श कम्पनीहरु, वित्तीय संस्थाहरूको र सरकारको छ । हाम्रो कोर कारोबार मा कर्पोरेट, वित्त, विवाद संकल्प र विकास, र वित्तीय सम्पत्ति को मा ऊर्जा, स्रोत र पूर्वाधार क्षेत्र । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन मा स्टकटोन, हाम्रो वकीलहरु छन् पूर्णतया लगे को सफलता मा दृढ गरेको ग्राहकहरु.
हामी उद्धार परिणाम-उन्मुख लागि सल्लाह निगम को सबै चरणहरु मा वृद्धि चक्र, देखि चुनौतीपूर्ण मागहरू को आर्थिक लेनदेन र जमानत गर्न विषयों छ । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन सेतो मामला मा स्थापित, न्यूयोर्क मा, वकिल संयुक्त राज्य अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व, अफ्रिका र एशिया. हाम्रो ग्राहकहरु छन्, सार्वजनिक र निजी आयोजित व्यापारिक कारोबार र वित्तीय संस्थाहरु, साथै सरकार र राज्य-स्वामित्व वस्तुहरूको, संलग्न । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन एक अत्यधिक, राष्ट्रिय कानुन दृढ प्रदान ग्राहक-केन्द्रित, उद्योग-खास सेवा कि परिणाम मा उच्च-मूल्य कानूनी सल्लाह लागि हाम्रो ग्राहकहरु. हाम्रो अभ्यास क्षेत्रमा धरना को पूर्ण सीमा कर्पोरेट कानूनी सेवाहरू सहित, कर्पोरेट प्रशासन र अनुपालन । व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन क्लिफर्ड सम्भावना छ एक को संसारको अग्रणी व्यवस्था कम्पनीहरु संग, बीस-नौ मा कार्यालय बीस देशहरू र केही, दुई सय कानूनी सलाहकारहरु । एक साझेदारी छ, दृढ छ, मात्रा र गहिराई को कानूनी स्रोत मार्फत चार प्रमुख बजार को अमेरिका, एशिया, युरोप र मध्य पूर्व. व्यवस्था दृढ गरेको अवलोकन व्यवस्था एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था दृढ मा फुकुओका कवर, सबै को क्यूशू क्षेत्र । फर्म को एक सीमा प्रदान सेवाहरू क्रस-सीमाना विवाद समाधान गर्न भिसा आवेदन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरु दुवै घरमा र विदेश, साथै जापानी ग्राहकहरु. हर्बर्ट व्यावसायिक सेवा कारोबार सँगै लाने, सबै भन्दा राम्रो मान्छे भर हाम्रो बीस-छवटा कार्यालय, सबै पूरा गर्न आफ्नो कानूनी सेवा आवश्यक विश्वव्यापी. हामी मदत गर्न सक्छ तपाईं महसुस मौका गर्दा प्रबन्ध जोखिम छ । मा स्थापित जापान मा, दृढ छ सञ्चालन लागि अधिक भन्दा सय वर्ष रूपमा जापान मा एक अग्रणी दृढ संग बलियो युरोपेली सम्बन्ध छ । भएको परंपरागत बीचमा भएको पहिलो लागि जर्मन कर्पोरेट ग्राहकहरु खोजी कानूनी समर्थन जापान, दृढ बढेको छ यसको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रीय र । छ त्यसैले डिजाइन को संगठन हाम्रो दृढ र यसको वर्कफ्लोज भनेर केही धीमा गर्न सक्छन्, हामीलाई तल: जानिजानि भर पर्नुको संरचना र सपाट वर्गीकरणको प्रदान काम वातावरण को लागि हाम्रो अत्यधिक योग्य र उत्प्रेरित वकिल छ । यसको मतलब यो हो कि प्रदान गर्न सक्षम छ को डिग्री छ । वकिल मा गरेको टोक्यो कार्यालय बुझ्न आवश्यकता र चुनौतीहरू कि ग्राहकहरु को अनुहार । को एक संयोजन माध्यम दृढ घनिष्ठ ज्ञान को जापानी बजार र यसको विशाल भौगोलिक पुग्न विश्व, दृढ छ, पूर्णतया राखिएको सेवा गर्न क्रस-सीमाना व्यापार को आवश्यकता गर्छ । गेट्स प्रतिनिधित्व अग्रणी वैश्विक निगम, वृद्धि र मध्य-बजार कम्पनीहरु, राजधानी बजार सहभागीहरू र उद्यमिहरु मा हरेक प्रमुख उद्योग समूह साथै सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, संगठन र व्यक्तिहरूलाई । हाम्रो अभ्यास छ एक छ । भए को एक ठूलो कानूनी सेवा प्रदायकको संसारमा माध्यम मा एक विलय को अभूतपूर्व क्षेत्र मा कानूनी क्षेत्र छ । जबकि ठूलो मा मात्रा, विलय रणनीति सरल थियो - सिर्जना गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अभ्यास सक्षम हेरविचार लिएर को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता छ । मोर्गन लुईस गरेको टोक्यो कार्यालय प्रस्ताव हाम्रो ग्राहकहरु परिष्कृत, प्रभावकारी कानूनी सल्लाह जापान मा. हाम्रो कार्यालय जोडती को वैश्विक स्रोत को मोर्गन लुईस संग कौशल र ज्ञान को हाम्रो जापानी संयुक्त उद्यम साथी, साथीहरूले माध्यम, हाम्रो मोर्गन लुईस- संयुक्त उद्यम । वकिल मा.
यो विदेशी व्यवस्था कार्यालय प्रदान उच्च-गुणवत्ता कानूनी सल्लाह अंग्रेजी र जापानी जापानी र विदेशी निगम, व्यवस्था कम्पनीहरु र व्यक्तिहरूलाई सन्दर्भमा, घरेलू क्रस-सीमाना र विदेशी- र नियामक मामिलामा । दृढ राख्छ उच्चतम नैतिक स्तर । श्री भवन देखि यसको पुरस्कार विजेता वित्त र प्रतिभूतिकरण प्रचलन, विकसित गरेको छ एक गहिराई, विशेषज्ञता को विस्तार कि सबै भर को क्षेत्रहरु को व्यापार र वित्त व्यवस्था छ । दृढ मान्यता छ उत्कृष्टता लागि, यसको अभिनव क्षमताहरु मा वित्त, विशेष हाम्रो काम को लागि मा परियोजना । व्यवस्था समूह मा लस एन्जलस, संविधानसभा, मा माहिर, बौद्धिक सम्पत्ति, व्यापार, मनोरञ्जन, अचल सम्पत्ति, उत्पादन, दायित्व, श्रम तथा रोजगार व्यवस्था छ । सानो दृढ प्रतिनिधित्व ग्राहक मा क्यालिफोर्निया, टेक्सास, ग्रेट ब्रिटेन, जापान र ताइपे । दृढ प्रदान गर्न उच्च-गुणवत्ता प्रतिनिधित्व बिना.
व्यवस्था दृढ छ संभाला अवस्थामा को लागि गैर-जापानी ग्राहकहरु को लागि अधिक बीस वर्ष छ । विशेष गरी हामी विश्वस्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविच्छेद, बच्चा हेरचाह, बच्चा अपहरण, अध्यागमन अवस्थामा छ । हामी पनि ह्यान्डल आपराधिक अवस्थामा, यातायात दुर्घटना मुआवजा, र कामदारहरूको दुर्घटना क्षतिपूर्ति, लागि छ । एक वैश्विक दृढ संग भन्दा, वकिल संग सोह्र कार्यालय. हाम्रो वकीलहरु शेयर उच्च स्तर, उत्कृष्टता गर्न एक प्रतिबद्धता छ, र एक आवेग मदत लागि आफ्नो ग्राहकहरु सफल । हाम्रो कर्पोरेट अभ्यास प्रतिनिधित्व केही सबैभन्दा गतिशील. डिललोन को एक छ आयरल्याण्ड गरेको अग्रणी व्यवस्था कम्पनीहरु मा ध्यान केंद्रित वित्तीय सेवा, बैंकिंग र राजधानी बजार, कर्पोरेट र एम एक, मुद्दा र विवाद संकल्प, अचल सम्पत्ति र कर लगाउने काम. डा, दर्ता जापान मा. मुख्य अभ्यास क्षेत्र को लागि विदेशी ग्राहकहरु छन् कानूनी सल्लाह अन्तर्गत जापानी छ ।.
सेट अप एक कम्पनी, जापान मा(संस्थापन) - भिसा अध्यागमन वकील जापान
Stečaj - Definicija, Primjeri I Slučajevi Procesi